I-Pentilin (Pentilin) > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Pentilin yezidakamizwa: imiyalelo yokusetshenziswa
Ngaphakathi, phakathi noma ngemuva kokudla, ukugwinya ngokuphelele, 400 mg izikhathi ezingama-2-3 ngosuku, inkambo - okungenani amaviki ayi-8.
Ku / in / in noma / injeks: 50-100 mg / ngosuku (kusawoti) imizuzu emi-5. Ku / ku noma ku / / ukumamatheka: I-100-400 mg / ngosuku (ku-saline ngokomzimba), isikhathi sokufakwa kwe-intravenous - imizuzu engama-90-180, ngo / a - imizuzu eyi-10-30, umthamo omkhulu wansuku zonke we-800 no-1200 mg, ngokulandelana. Ukumiliselwa okuqhubekayo - 0.6 mg / kg / h amahora angama-24, umthamo wansuku zonke we-1200 mg.
Nge-Cl creatinine engaphansi kwe-10 ml / min, umthamo wehliswa ngo-50-70%. Ezigulini eziku-hemodialysis, ukwelashwa kuqala ngomthamo we-400 mg / ngosuku, okunyuselwa kokujwayelekile ngokufakwa okungenani kwezinsuku ezingama-4.
Isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous and intra-arterial management: esobala, sinombala noma siphuzi ngombala (ama-5 ml ama-ampoules, ama-ampoules ayi-5 emgqonyeni wethala noma opulasitiki, isiqubu esingu-1 noma ugqoko ebhodini lamakhadibhodi),
Izibhebhe zesenzo eside, zifakwe kumafilimu: i-oval, i-biconvex, emhlophe (ama-pcs ayi-10. e-blister, ebhokisini lekhadibhodi 2 amanxeba)
Ukwakhiwa kwe-1 ampoule yesisombululo sePentilin (5 ml):
into esebenzayo: pentoxifylline - 100 mg,
izakhi ezingeziwe: i-sodium hydrogen phosphate dihydrate, i-sodium dihydrogen phosphate dihydrate, i-sodium chloride, i-disodium edetate, amanzi wokujova.
Ukwakhiwa kwethebhulethi elingu-1 iPililin:
into esebenzayo: pentoxifylline - 400 mg,
izakhi ezingeziwe: i-magnesium stearate, hypromellose, macrogol 6000, silicon dioxide anhydrous colloidal,
igobolondo: hypromellose, macrogol 6000, talc, titanium dioxide E171.
I-Pentoxifylline - into esebenzayo yePentilin - i-antispasmodic eqenjini le-purine elithuthukisa izakhiwo ze-rheological (fluidity) kanye ne-microcirculation yegazi. Indlela yokusebenza yesidakamizwa yingenxa yamandla ayo okuvimbela i-phosphodiesterase futhi ikhuphule ukuqina kwe-cyclic AMP kuma-platelet kanye ne-ATP kumaseli abomvu egazi, ngenkathi kugcwala amandla wamandla, ngenxa yalokho ukukhula kwe-vasodilation, ukuqina kokuqina kwemithambo yegazi kuyancipha, ukuqina kanye nomthamo wegazi wokunyuka, ngenkathi isilinganiso senhliziyo singekho kakhulu uyashintsha.
I-Pentoxifylline inyusa imithambo ye-coronary, ekhulisa ukulethwa komoya-mpilo kuyi-myocardium (i-antianginal effect), nemithambo yegazi yamaphaphu, ethuthukisa i-oxygenation oxygenation.
Umuthi ukhulisa ithoni yemisipha yokuphefumula, ikakhulukazi imiphimbo kanye nezicubu eziphakathi nendawo.
Kuthuthukisa i-microcirculation yegazi ezindaweni zokujikeleza kokuphazamiseka, ikhuphula ukuqina kwe-membrane ye-erythrocyte, yehlise ukuvela kwegazi.
Nge-lesion ye-occlusive yemithambo ye-peripheral (i-claudication esezingeni eliphakathi nendawo), iPentilin yandisa ibanga lokuhamba, isusa iminyakazo yasebusuku yemisipha yethole nobuhlungu bokuphumula.
IPentoxifylline isetshenziswe kakhulu kumaseli egazi abomvu nesibindi. Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, icishe ifakwe ngokuphelele emgomeni wesisu. Indlela yesikhathi eside yamathebulethi inika ukukhishwa okuqhubekayo kwengxenye esebenzayo yomuthi nokufakwa kwayo umfaniswano.
I-Pentoxifylline idlula esigabeni sokuqala ngokusebenzisa isibindi, okuphumela kuma-metabolites amabili asemqoka wemithi: 1-3-carboxypropyl-3,7-dimethylxanthine (metabolite V) ne-1-5-hydroxyhexyl-3,7-dimethylxanthine (metabolite I), iplasma ukugxila okukuphindwe izikhathi ezi-8 nezingu-5 kune-pentoxifylline, ngokulandelana.
IPentoxifylline kanye nama-metabolites ayo azibophele kumaprotheni e-plasma.
Umuthi osefomeni elide ufinyelela ekuhlushweni kwawo okuphelele kungakapheli amahora ama-2-5. Kusatshalaliswa ngokulinganayo. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kungamahora ayi-0.5-1,5.
Ukuphila kwesigamu se-pentoxifylline ngemuva komthamo we-100 mg cishe ngamahora ayi-1,1. Inomthamo omkhulu wokusatshalaliswa (ngemuva kokumiliselwa okwemizuzu engama-30 ka-200 mg - 168 L), kanye nokukhishwa okuphezulu (4500-5100 ml / min).
U-94% womthamo owamukelwe udonswa izinso ngendlela yama-metabolites (ikakhulukazi ama-metabolite V), cishe u-4% - ngamathumbu. Kulokhu, kuze kufike ku-90% womthamo udotshwa ngaphakathi kwamahora ama-4 okuqala. I-excretion yama-metabolites ibamba kancane ezigulini ezinokulimazeka okukhulu kwe-renal. Uma kwenzeka umsebenzi wesibindi ongasebenzi kahle, impilo yengxenye ye-pentoxifylline iyelulwa futhi i-bioavailability yayo iyanda.
I-Pentoxifylline ikhishwa ubisi lwebele.
ukuthikamezwa kokuzwa kwemvelaphi yemithambo,
ukwehluleka okungapheliyo, okuphathelene nokujikeleza kwe-subacute kanye nokukhulu kwe-retina kanye ne-choroid,
ingozi yemvelo ebangelwa yi-ischemic,
ukuphazamiseka kwegazi kokujikeleza kwegazi ngenxa ye-atherossteosis, isifo sikashukela i-mellitus (i-angiopathy yesifo sikashukela),
i-angiopathy (i-paresthesia, isifo sikaRaynaud),
izilonda ze-trophic izicubu ngenxa yokulimala kwe-venous noma i-arterial microcirculation (i-frostbite, i-post-thrombophlebitis syndrome, izilonda ze-trophic, gangrene),
discirculatory and atherosulinotic encephalopathies.
isifo sohlangothi esibuhlungu se-hemorrhagic,
hypotension ye-arterial engalawulwa,
izilonda ezinzima ze-atherosclerotic of the coronary or cerebral artery,
hypersensitivity to Pentilin element noma amanye ama-methylxanthines.
ukwehluleka kwenhliziyo okungapheli
umsebenzi wokuphazamiseka wezinso (imvume ye-creatinine ngezansi kwe-30 ml / min),
ukuthambekela okwandayo kokuphuma kwegazi, kufaka phakathi lapho kusetshenziswa ama-anticoagulants, ukuphazamiseka kohlelo lokujiya kwegazi, ngemuva kokungenelela kokuhlinzwa okusanda kwenzeka,
i-peptic ulcer yesisu kanye ne-duodenum yamathebulethi.
Ngendlela yesisombululo, iPentilin iphathwe ngaphakathi noma ngaphakathi kwezitho.
Udokotela unquma indlela yokuphatha kanye nethamo elifanele lomuthi esigulini ngasinye, ngokuya ngobunzima bokuphazamiseka kokujikeleza kanye nokubekezelelana ngakunye kwe-pentoxifylline. Ukumiliselwa kwe-intravenous kwenziwa endaweni ephakeme.
Njengomthetho, ezigulini esezikhulile, umuthi uphathwa ngaphakathi izikhathi ezi-2 ngosuku (ekuseni nantambama), ama-200 mg (ama-ampoules ama-5 ml ngamunye) noma ama-300 mg (ama-3 ampoules we-5 ml ngayinye) ngo-250 noma 500 ml we-0,9% we-sodium chloride solution. noma isixazululo se-ringer. Ukuvumelana nezinye izixazululo zokungenela kufanele kuhlolwe ngokwahlukana, kepha izisombululo ezicacile kuphela okufanele zisetshenziswe.
Isikhathi sokufakwa okungenani imizuzu engama-60 yomthamo we-pentoxifylline 100 mg. Amavolumu afakiwe angancipha lapho kukhona izifo ezilinganayo, ngokwesibonelo, ukwehluleka kwenhliziyo. Ezimweni ezinjalo, kufanelekile ukusebenzisa i-infuser ekhethekile ukulawula ukumiliselwa.
Ngemuva kokungeniswa kosuku, uma kunesidingo, amaphilisi wePentilin 400 mg anqunyelwe ngokungeziwe - ama-2 ama-PC. Uma ama-infusions amabili enziwa ngezikhathi ezithile, khona-ke ithebhulethi engu-1 ingathathwa ngaphambi kwesikhathi (cishe ngehora leshumi nambili ntambama).
Ezimweni lapho ukufakwa kwe-intravenous ngenxa yezimo zomtholampilo kungenziwa kanye kuphela ngosuku, ukuphathwa okwengeziwe kwePentilin emathebhulethini ngenani lama-3 ama-PC. (Amaphilisi ama-2 ntambama, 1 kusihlwa).
Ezimweni ezibucayi, ngokwesibonelo, nge-gangrene, izilonda ezixakile zesigaba sesi-III - IV ngokuhlukaniswa kukaFontaine - Lerish - Pokrovsky, nobuhlungu obukhulu bokuphumula, ukuphathwa kwezidakamizwa okwenziwe isikhathi eside kuboniswa - amahora angama-24.
Imithamo enconyiwe yokuphathwa kwe-intraarterial: ekuqaleni kokwelashwa - i-100 mg ye-pentoxifylline ku-50-100 ml yesisombululo se-sodium chloride engu-0,9%, ngezinsuku ezilandelayo - 100-400 mg ku-50-100 ml wesisombululo se-sodium chloride engu-0.9%. Izinga lokuphatha lingu-10 mg / umzuzu, isikhathi sokuphatha siyimizuzu eyi-10-30.
Emini, ungafaka umuthi kumthamo ofinyelela ku-1200 mg. Kulokhu, umthamo ngamunye ungabalwa ngokuya ngefomula elandelayo: 0.6 mg ye-pentoxifylline ngekhilogremu ngayinye yesisindo somzimba ngehora. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke uzoba yi-1000 mg isiguli esinesisindo somzimba esingu-70 kg, 1150 mg isiguli esinesisindo somzimba esingu-80 kg.
Iziguli zokwehluleka kwezinso, ngokuya ngokubekezelela komuntu ngamunye umuthi, zinciphisa umthamo ngo-30-50%.
Ukwehliswa komthamo kuyadingeka nasezigulini ezinokulimala kakhulu kwesibindi, ngenkathi ukubekezelela komuntu ngamunye kaPentilin kufanele kubhekwe.
Kunconywa ukuqala ukwelashwa ngemithamo ephansi ngokunyuka kancane kancane kweziguli ezinomfutho wegazi ophansi, kanye nasezigulini ezivame ukwehlisa umfutho wegazi (ngokwesibonelo, ngesifo senhliziyo esibuhlungu kakhulu, i-hemodynamically stenosis ebalulekile yemithambo ye-cerebral).
I-Pentilin 400 mg amaphilisi kufanele aphuzwe ngomlomo, ngemuva kokudla: ginya lonke futhi uphuze amanzi amaningi.
Umthamo onconyiwe yi-1 ithebhulethi 2 noma kathathu ngosuku. Ungeqi umthamo nsuku zonke we-1200 mg.
Iziguli ezinokwehluleka okungapheli kwe-renal (imvume ye-creatinine
Amaphilisi we-400 mg efakwe kumafilimu
into esebenzayo - pentoxifylline 400 mg,
ababukeli: I-hypromellose, i-macrogol 6000, i-magnesium stearate, i-silicon dioxide colloidal anhydrous,
Ukwakhiwa kwegobolondo: I-hypromellose, macrogol 6000, titanium dioxide (E 171), talc.
Amathebulethi okwakheka okusaqanda okuphezulu anendawo ye-biconvex, efakwe ngengubo emhlophe yefilimu
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-pentoxifylline ishesha futhi igxile ngokuphelele. I-bioavailability yamaphilisi we-pentoxifylline ahlala isikhathi eside icishe ibe ngama-20%. Ukudla kuyancipha, kepha akukunciphisi ukuphelela kokufaka umuthi.
Ukuqoqeka okukhulu kwe-plasma kwenzeka ngaphakathi kwamahora amabili kuya kwayi-4. IPentoxifylline ikhishwa ubisi lwebele, olutholwe kungakapheli amahora ama-2 ngemuva kokuphatha, kuzinto zombili - ezingashintshiwe nangendlela yama-metabolites.
I-Pentoxifylline icatshangelwa ikakhulu esibindini futhi ngezinga elincane kumaseli abomvu egazi. Iba nemetabolism ebalulekile futhi ecacile kwimpumelelo yokuqala. Ukugxila kwe-plasma kwama-metabolites asebenzayo kukhona izikhathi ezi-5 nezingu-8 eziphakeme kunokuxineka kwe-pentoxifylline. It is metabolised by contraction (nge-α-keto reductase) ne-oxidation.
Ama-Metabolites adotshwa ikakhulukazi kumchamo (cishe ama-95%). Cishe i-4% yomthamo othathwe udotshwa ngemfucumfucu. Ekungasebenzi kahle kwe-renal, i-excretion yama-metabolites iyancipha. Ngokungasebenzi kahle kwe-hepatic, impilo yesigamu yinde futhi i-bioavailability iyanda. Kulokhu, ukuze uvikele ukunqwabelana komuthi emzimbeni wezoguli ezinjalo, umthamo kumele uncishiswe.
IPentoxifylline ithuthukisa ukwakheka kwegazi ngokuthinta ukuguquguquka kwengqondo okuguqulwe ngokwenzeka kwamangqamuzana abomvu egazi, ivimbele ukuhlangana kweplatelet futhi inciphise ukubonakala okuphezulu kwegazi. Indlela yokusebenza yesenzo se-pentoxifylline yokuthuthukisa izakhiwo zegazi ezibandakanya ukuvela kwamaseli egazi abomvu emazingeni e-ATP (adenosine triphosphate), cAMP (cyclo-adenosine monophosphate) namanye ama-cyclic nucleotides. I-Pentoxifylline inciphisa kakhulu ukuvela kwe-plasma negazi ngokunciphisa ukuhlangana kwe-fibrinogen. Ukwehla okunjalo kokuhlushwa kwe-fibrinogen kungumphumela wokwanda komsebenzi we-fibrinolytic kanye nokwehla kokuqalwa kwawo. Ngaphezu kwalokho, ngokuvimbela ama-enzymus we-membrane-eboshwe we-phosphodiesterase (okuholela ekwandeni kokuxineka kwe-cAMP) kanye ne-thromboxane synthesis, i-pentoxifylline ivimbela ngokuqinile ukuhlanganiswa kwe -plontaneous nephoqelelwe futhi ngasikhathi sinye kuvuselela ukuhlanganiswa kwe-prostacyclin (i-prostaglandin I2).
I-Pentoxifylline inciphisa ukukhiqizwa kwama-interleukin kuma-monocytes nama-macrophages, anciphisa ubunzima bokusabela kokuvuvukala. I-Pentoxifylline ithuthukisa ukugeleza kwegazi okuphathelene nolunye uhlangothi, ikhulisa ingcindezi yokuncipha komoya ngokwe-oxygen emithanjeni ye-ischemic ethintekile emaphethelweni aphansi, ku-cortex yecerebral kanye ne-cerebrospinal fluid, e-retina yeziguli ezine-retinopathy.
Lokhu okulandelayo yizimo zokusabela ezingezinhle ezenzeka ngesikhathi sokuvivinywa kliniki nangemva kokumaketha ngemuva.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo. I-Arrhythmia, tachycardia, i-angina pectoris, yehlise umfutho wegazi, yandisa umfutho wegazi.
Kusuka ohlelweni lwe-lymphatic nohlelo lwegazi. I-Thrombocytopenia, i-thrombocytopenic purpura, i-aplastic anemia (ukunqanyulwa okuyingxenye noma okuphelele kokwakhiwa kwawo wonke amaseli egazi), i-pancytopenia, engabulala.
Kusuka ohlelweni lwezinzwa. Isiyezi, ikhanda, i-aseptic meningitis, ukuthuthumela, ama-paresthesias, ama-cramps.
Kusuka ipheshana lesisu. Ukuqunjelwa esiswini, umuzwa wokucindezelwa esiswini, ukuthopha, isicanucanu, ukuhlanza, noma isifo sohudo.
Engxenyeni yesikhumba nezicubu ezithambile. Ukulunywa, ukubomvu kwesikhumba kanye ne-urticaria, ubuthi be-necrolysis obunobuthi kanye neStevens-Johnson syndrome.
Ukwephulwa kokusebenza kwemithambo yegazi. Ukubuyiselwa kokushisa (ukugqwala okushisayo), ukopha, i-edema yangaphakathi.
Kusuka emasosheni omzimba. Ukuphendula kwe-anaphylactic, ukusabela kwe-anaphylactoid, i-angioedema, i-bronchospasm kanye ne-anaphylactic shock.
Engxenyeni yesibindi kanye nenyongo. Intrahepatic cholestasis.
Ukuphazamiseka kwengqondo Ukuvuka, ukuphazamiseka kokulala, ukubona izinto ezingekho emhlane.
Kusuka ohlangothini lwezitho zombono. Ukulimazeka kokubonakalayo, i-conjunctivitis, i-retinal hemorrhage, i-retinal detachment.
Abanye. Kubikwe amacala e-hypoglycemia, ukujuluka ngokweqile nomkhuhlane.
Akukho okuhlangenwe nakho okwanele ngalo muthi Pentiline abesifazane abakhulelwe. Ngakho-ke, akunconywa ukunquma iPentilin ngesikhathi sokukhulelwa.
I-Pentoxifylline ngamanani amancane idlulela kubisi lwebele. Uma ngabe iPentilin inqunyelwe, yeka ukuncelisa ibele.
Umphumela wokwehlisa ushukela wegazi okwenzeka ku-insulin noma kuma-antidiabetesic agents angathuthukiswa. Ngakho-ke, iziguli ezithola imishanguzo yesifo sikashukela kufanele zigadiwe.
Esikhathini sokumaketha ngemuva, amacala omsebenzi owanda kakhulu we-anticoagulant abikwa ezigulini ezaziphathwa ngasikhathi sinye nge-pentoxifylline ne-anti-vithamini K. Lapho kuchazwa noma kushintshwa i-pentoxifylline.
Pentiline kungakhuphula umphumela we-hypotensive wezidakamizwa ze-antihypertensive nezinye izidakamizwa okungaholela ekwehleni kwengcindezi yegazi.
Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-pentoxifylline ne-theophylline kwezinye iziguli kungaholela ekwandeni kwamazinga e-theophylline egazini. Ngakho-ke, kungenzeka ukwandisa imvamisa futhi ukwandise ukubonakaliswa kokuphendula okungathandeki kwe-theophylline.
Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-pentoxifylline ne-ketorolac kungaholela ekwandeni kwesikhathi se-prothrombin futhi kwandise ingozi yokopha. Ingozi yokopha ingahle inyuke ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-pentoxifylline ne-meloxicam. Ngakho-ke, ukwelashwa kanyekanye ngalezi zidakamizwa akunconywa.
Izimpawu zokuqala zokusebenzisa ngokweqile i-overdose Pentiline ukuqunjelwa inhliziyo, isiyezi, i-tachycardia, noma ukuncipha kwegazi.Ngaphezu kwalokho, izinkomba ezinjengomkhuhlane, ukugabha, umuzwa wokushisa (ukuqubuka okushisayo), ukulahlekelwa ukwazi, i-areflexia, ukubanjwa kwamathoni kanye nokuhlanza umbala wezizathu zekhofi nakho kungakhula njengesibonakaliso sokuphuma kwegazi esiswini.
Ukwelashwa. Ukuze ulaphe ukweqisa obukhulu futhi uvikele ukuvela kwezinkinga, kufanele kuqashwe futhi kuqashelwe ukwelashwa okuqakathekileko nokwamukelwa kwezindlela zokwelapha.
Ngezibonakaliso zokuqala zokuphendula kwe-anaphylactic / anaphylactoid, ukwelashwa nge-pentoxifylline kufanele kunqanyulwe futhi kufune izeluleko kudokotela.
Kudingeka kakhulu ukuqapha ngokucophelela kwezokwelapha ezigulini ezinesifo sokuqina kwenhliziyo, i-arterial hypotension, corlerary sclerosis, kanye nalabo abaye bahlaselwa inhliziyo noma bahlinzwa.
Endabeni ye-pentoxifylline, iziguli ezinokwehluleka kwenhliziyo okungapheli kufanele zifinyelele esigabeni sesinxephezelo sokujikeleza kwegazi.
Ezigulini ezine-systemic lupus erythematosus (SLE) noma isifo se-tiski exubekile, i-pentoxifylline ingabekwa kuphela ngemuva kokuhlaziywa ngokuphelele kwezingozi nezinzuzo ezingabakhona.
Ngenxa yengozi yokuphelelwa ngumdlavuza kanye nokusebenzisa kanyekanye i-pentoxifylline kanye nama-anticoagulants omlomo, ukuqapha ngokucophelela nokuqapha njalo kwamapharamitha okubumbene kwegazi (isilinganiso esijwayelekile samazwe omhlaba (MES)) siyadingeka.
Njengoba kunobungozi be-aplastic anemia ngesikhathi sokwelashwa nge-pentoxifylline, kudingeka ukuthi kuqashwe njalo ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile.
Ezigulini ezinesifo sikashukela futhi zithola ukwelashwa ngama-insulin noma ama-hypoglycemic agents, ngokusebenzisa imithamo ephezulu ye-pentoxifylline, kungenzeka ukwandisa umphumela wale mishanguzo kushukela wegazi (bheka isigaba “Ukusebenzisana nezinye izidakamizwa nezinye izinhlobo zokusebenzelana”).
Ezigulini ezinokwehluleka kwe-renal (imvume ye-creatinine engaphansi kwama-30 ml / min) noma ukungasebenzi kahle kwesibindi, i-pentoxifylline excretion ingabambezeleka. Ukuqapha okufanele kuyadingeka.
Iziguli zokwehluleka kwezinso. Ezigulini ezinokwehluleka kwe-renal (imvume ye-creatinine engaphansi kwama-30 ml / min), ukunikezwa kwemithamo kuze kufike ku-50-70% womthamo ojwayelekile kufanele wenziwe ngokubhekela ukubekezelelana komuntu ngamunye, ngokwesibonelo, ukusetshenziswa kwe-pentoxifylline 400 mg izikhathi ezi-2 ngosuku ngosuku esikhundleni se-400 mg izikhathi ezintathu ngosuku.
Iziguli ezinokuqina kokuqina kwesibindi. Ezigulini ezinokuwohloka kwesibindi okunzima, isinqumo sokwehlisa umthamo kufanele senziwe ngudokotela, kucatshangelwa ubunzima besifo nokubekezelelana esigulini ngasinye.
Ukubheka ngokucophelela kuyadingeka:
iziguli ezinama-arrhythmias enhliziyo,
iziguli ezine-myocardial infarction
iziguli ezine-hypotension ye-arterial,
iziguli ezine-atherosulinosis enzima yemithambo ye-cerebral and coronary, ikakhulukazi nge-hypertension ye-arterial ye-arterial ne-arrhythmias yenhliziyo. Kulezi ziguli, kusetshenziswa umuthi, ukuhlaselwa yi-angina, i-arrhythmias kanye ne-hypertension ye-arterial kungenzeka,
iziguli ezihluleka ukuhluleka kwezinso (imvume ye-creatinine ngaphansi kwe-30 ml / min.),
iziguli ezihluleka kakhulu yisibindi,
iziguli ezinomkhuba ophakeme wokuphuma kwegazi, okubangelwa, ngokwesibonelo, ngokuphathwa ngama-anticoagulants noma ukuphazamiseka kwegazi okufaka igazi. Ukopha - bheka isigaba "Contraindication",
iziguli ezinomlando wezilonda zesisu kanye ne-duodenal, iziguli ezisanda kuthola ukwelashwa kokuhlinzwa (ingozi eyengeziwe yokopha, edinga ukuqashwa okuhleliwe kwe-hemoglobin kanye namazinga e-hematocrit)
iziguli eziphathwe ngasikhathi sinye ngabaphikisi be-pentoxifylline nabanguvithamini K (bona isigaba “Ukusebenzisana nezinye izidakamizwa nezinye izinhlobo zokusebenzelana”),
iziguli eziphathwe ngasikhathi sinye ngama-pentoxifylline kanye nama-hypoglycemic agents (bheka isigaba "Ukusebenzisana nezinye izidakamizwa nezinye izinhlobo zokusebenzelana").
Njengoba kunolwazi olungenele ngokusetshenziswa kwe-pentoxifylline kwabesifazane abakhulelwe, akufanele kunqunywe ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngesikhathi sokuqunjelwa, i-pentoxifylline idlulela kubisi lwebele. Kodwa-ke, usana luthola amanani amancane kuphela. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuthi ukusetshenziswa kwe-pentoxifylline ngesikhathi sokuncelisa kuboniswa ukuthi kunethonya elithile enganeni.
IPentilin inomthelela omncane noma awunawo nhlobo emandleni okushayela imoto nezinye izindlela. Kodwa-ke, kwezinye iziguli kungadala isiyezi, futhi ngenxa yalokho, ngokungaqondile ukunciphisa ikhono le-psychophysical lokushayela imoto nezinye izindlela. Kuze kube yilapho iziguli zithola ukuthi zisabela kanjani ekwelashweni, azelulekwa ukushayela imoto noma ukusebenza nezinye izindlela.